YouTube မှာ View အများဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်လာတဲ့ Despacito
5 Aug 2017 . 11:51 AM
Luis Fonsi နဲ့ Daddy Yankee တို့ရဲ့ “Despacito” သီချင်းဗီဒီယိုဟာ ယခုအခါ YouTube မှာ လြူုကည့်အများဆုံး ဗီဒီယိုဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် ဗီဒီယိုဟာ ထွက်တာ ၇လပဲ ရှိသေးတာဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိ YouTube သမိုင်းမှာ View ၃ဘီလီယံကျော်သွားတဲ့ ပထမဆုံး ဗီဒီယိုအဖြစ်လည်း စံချိန်တင်သွားခဲ့တာပါ။
သူ့နောက်မှာတော့ Furious7ထဲက Wiz Khalifa ရဲ့ “See You Again” သီချင်းဗီဒီယိုက ဒုတိယမှာရပ်တည်နေပြီး PSY ရဲ့ “Gangnam Style” က ၂၀၁၂ တုန်းက တင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့စံချိန်ကနေ တတိယမှာ ရှိနေပါတယ်။ Khalofa ဟာ လတ်တလောလအတွင်းမှာတင် See You Again နဲ့ View အများဆုံးရထားတာဖြစ်ပေမယ့် ‘Despacito’ က လျှင်လျှင်မြန်မြန်ပဲ ကျော်တက်သွားခဲ့တာပါ။
ဒီလအစောပိုင်းမှာလည်း “Despacito” ဟာ ထုတ်လွှင့်မှုအများဆုံး သီချင်းအဖြစ် စံချိန်တင်ထားခဲ့တာပါ။ စပိန်သီချင်းအနေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Justin Bieber ကတောင် Additional Verses တွေထပ်ပေါင်းပြီး ထည့်ဆိုခဲ့ရပါတယ်။
Akhayar ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း အားလုံးလိုလို Despacito ကိုနားထောင်ပြီးလောက်ကြပါပြီ။ တကယ်လို့ နားမထောင်ရသေးရင်လည်း အောက်မှာ ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ Article ကို Despacito နားထောင်ပြီးရေးနေတာပါ ??
Ref: The Verge, Billboard
YouTube မှာ View အမြားဆုံးဗီဒီယိုဖွဈလာတဲ့ Despacito
Luis Fonsi နဲ့ Daddy Yankee တို့ရဲ့ “Despacito” သီခငျြးဗီဒီယိုဟာ ယခုအခါ YouTube မှာ လွူုကညျ့အမြားဆုံး ဗီဒီယိုဖွဈလာပါတယျ။ အဲ့ဒီအပွငျ ဗီဒီယိုဟာ ထှကျတာ ၇လပဲ ရှိသေးတာဖွဈပမေယျ့ လကျရှိ YouTube သမိုငျးမှာ View ၃ဘီလီယံကြျောသှားတဲ့ ပထမဆုံး ဗီဒီယိုအဖွဈလညျး စံခြိနျတငျသှားခဲ့တာပါ။
သူ့နောကျမှာတော့ Furious7ထဲက Wiz Khalifa ရဲ့ “See You Again” သီခငျြးဗီဒီယိုက ဒုတိယမှာရပျတညျနပွေီး PSY ရဲ့ “Gangnam Style” က ၂၀၁၂ တုနျးက တငျခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့စံခြိနျကနေ တတိယမှာ ရှိနပေါတယျ။ Khalofa ဟာ လတျတလောလအတှငျးမှာတငျ See You Again နဲ့ View အမြားဆုံးရထားတာဖွဈပမေယျ့ ‘Despacito’ က လြှငျလြှငျမွနျမွနျပဲ ကြျောတကျသှားခဲ့တာပါ။
ဒီလအစောပိုငျးမှာလညျး “Despacito” ဟာ ထုတျလှငျ့မှုအမြားဆုံး သီခငျြးအဖွဈ စံခြိနျတငျထားခဲ့တာပါ။ စပိနျသီခငျြးအနနေဲ့ နောကျပိုငျးမှာ Justin Bieber ကတောငျ Additional Verses တှထေပျပေါငျးပွီး ထညျ့ဆိုခဲ့ရပါတယျ။
Akhayar ပရိတျသတျကွီးလညျး အားလုံးလိုလို Despacito ကိုနားထောငျပွီးလောကျကွပါပွီ။ တကယျလို့ နားမထောငျရသေးရငျလညျး အောကျမှာ ကွညျ့ရှုနားဆငျနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ဒီ Article ကို Despacito နားထောငျပွီးရေးနတောပါ ??
၂၀၁၉ မှာ Apple ဆီကမြင်ရဖွယ်ရှိတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ Device ၅ မျိုး
PUBG Update မှာ Zomibe အပြင် Moonlight Mode နဲ့ Arcade Match တို့ပါလာပြီ